Akụkọ - Hebei Xuxiang Bicycle Co., Ltd.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hebei Xuxiang Bicycle Co., Ltd.
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Hebei Xuxiang Bicycle Co., Ltd. bụ ụlọ ọrụ ọkachamara n'ichepụta na nhazi nke igwe igwe ụmụaka, igwe kwụ otu ebe, skooters, ụgbọ ala na-agbagharị, na ụdị ngwa igwe dị iche iche. Anyị nwere otu njikwa njikwa dị elu yana ndị otu R&D ọkachamara nwere ozi ngwa ngwa, ụlọ ọrụ mmepụta ọgbara ọhụrụ nke na-ewepụta na sistemụ njikwa ndị ahịa nke ọma. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị na Xingtai City, Hebei Province. Gburugburu ebe obibi dị elu yana ọnọdụ okporo ụzọ dị mma na-enyere ụlọ ọrụ ahụ aka ịbanye ngwa ngwa n'ahịa ụwa wee bụrụ otu n'ime ndị na-emepụta igwe kwụ otu ebe ụmụaka na China.
Xuxiang Bicycle factory e guzobere na 2013 na a aha isi obodo nke RMB 8 nde na ebe nke 9,000 square mita. E tinyere ya n'imepụta ya na June 2014, na-emepụta ụgbọ ala ụmụaka na igwe kwụ otu ebe ihe dị ka PC 20,000 n'ime afọ. Site na ogo ngwaahịa nke mbụ, mmepụta amụbaala okpukpu abụọ maka afọ ise sochirinụ. E nwere ihe karịrị 60 ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe, awe nwere mepụtara a semblance, emebe, ngwaahịa-ezukọta na àgwà ule usoro , anyị na-ere nke ọma na-agbasa n'elu karịa 30 mba na mpaghara. Ọ nwetara n'ozuzu ahịa ihu ọma na elu otuto, nwere. nwetara ntụkwasị obi onye ahịa na nkwado ahụ. Ma nọgide na-enwe mmekọrịta nkwado ogologo oge.
Site na 2016, anyị guzobere ngalaba mbupụ ahia mba ofesi iji mepụta ahịa na mba ofesi na ọrụ ya dị elu na ngwaahịa dị elu. N'otu oge ahụ, anyị na-aga n'ihu na-emeziwanye mmepụta mmepụta ihe na ịmepụta ngwaahịa mbụ ndị ọzọ na-egbo mkpa nke ụwa. Gorgeous na-agbaso ụkpụrụ nke "ịlanarị site na ịdịmma, mmepe site na ọrụ", na-elele nkwalite ngwaahịa ngwaahịa na njikwa ọhụrụ dị ka ike na-anya mmepe nke ụlọ ọrụ ahụ, ma na-aga n'ihu n'ihu n'ụzọ nke "ịdị mma nke mbụ, njikwa ọkwa mbụ, na ọrụ nke mbụ”.
Oge nzipu: Ọgọst-18-2021